IBurkina Faso: "Ukuhlaselwa kwalesi silinganiso, kuhlasela izitha ngamabomu, yinto entsha" - JeuneAfrique.com - Techip RELAY
Accueil » INQUBOMGOMO »IBurkina Faso:" Ukuhlaselwa kwalesi silinganiso, kuhlasela izitha ngamabomu, yinto entsha "- JeuneAfrique.com
Ukuhlasela kwenhlangano ephethe abasebenzi benkampani yezimayini, eMpumalanga, ebulalayo kakhulu ebelazi izwe, kuphawula ushintsho ekusebenzeni kwamaqembu ahlomile? Ngenkathi umongameli waseBurkinabe ememezela "ukuqashwa kwabavolontiya ezindaweni ezisengozini", uTristan Guéret, weqembu eliqinile labeluleki ngeRisk, wethula ukuhlaziywa kwakhe ngalesi simo.
Ngosuku olulandelayo Ukuhlaselwa kwenkampani ethwala abasebenzi bayo imayini yegolide eBoungou, eyabulala abantu be38 kwalimala i-60URoch Marc Christian Kaboré ukhiphe umthetho wokulila kwezinsuku ezintathu ezweni lonke, wathi "abantu mabangahlali ndawonye nobuphekula" lapho bebhekene nezenzo ezingahlosile okuhloswe ngazo ukuhlwanyela i-psychosis phakathi kwabantu bakithi kanye nokwenza izwe libe nentando yeningi. Uphinde wamemezela "ukuqashwa kwabavolontiya ukuzivikela ezindaweni ezisengcupheni".
ICanadian Mining Exploration Company of West Africa (Semafo), esebenza imayini yaseBoungou futhi abasebenzi bayo ababeyizisulu zokuhlaselwa kukaNovemba 6, yamisa okwesikhashana imisebenzi yayo kwidiphozithi auriferous "ngenxa yokuhlonipha izisulu nezihlobo zabo".
Uma i-CEO yenkampani yaseCanada iziveze ukuthi "ihlukumezekile ngalokhu kuhlaselwa okungakaze kwenzeke", ukushaya kwalokhu kuhlasela - okungakenziwa ukuthi kuthiwe - akuyona eyomuntu kuphela, kuyaye futhi nakwezomnotho.
USemafo, ophinde abekhona eCôte d'Ivoire futhi unemayini yesibili eBurkina Faso, iMana, ukhiqize isamba segolide se-68 000 egolide ngekota lesithathu le-2019, kufaka phakathi ama-55 600 ounces akhishwe kumayini okuyiBoungou kuphela, iyasebenza kusukela ngo-Septhemba 2018. Futhi inkampani yaseCanada iyingxenye enkulu yomkhakha wegolide weBurkinabe, osezingeni lelizwe.
UTristan Guéret, umhlaziyi onguchwepheshe wase-Afrika engezansi kweSahara eRisk Advisory Group, inkampani yaseLondon yezeluleko zezepolitiki nezokuphepha kanye nokuhlaziya, ubuyile Intsha yase-Afrika ekuhlaseleni kwakamuva futhi, kabanzi, ukuwohloka kwesimo sokuphepha ezweni.
I-Young Africa: Ukuhlasela kukaBoungou, kubhekiswe kubasebenzi basezimayini, izakhamuzi, kusho yena ukuguqulwa kwemodi yokusebenza kwamaqembu we-jihadist?
Kungenzeka. Ukuhlasela kukaBoungou, obekuhlose izakhamizi, kuyamangaza impela. Ikakhulu kusukela amaqembu ahlomile, ngaphandle kwamacala ambalwa okuhlaselwa ngqo izakhamuzi, ngaphambili ayehlose ikakhulu izimpawu zesimo.
U-Auguste Etouke uthola iGrand Prix of Excellence yase-Afrika Yokukhuthaza i-Urban Order